Ungawusindisa Kanjani Umkhankaso Wokwakha Isixhumanisi Esikhokhelwa Ngokukhishwa | Martech Zone
I-algorithm yeGoogle iyashintsha ngokuhamba kwesikhathi futhi ngenxa yalezi zinkampani kuyaphoqelelwa ukuthi ziphinde zicabange ngayo Amasu we-SEO. Esinye sezenzo ezibalulekile zokukhuphuka kwamazinga ngumkhankaso wokwakha isixhumanisi oholwa kokuqukethwe
Ungahle ubhekane nesimo lapho ithimba lakho le-SEO lisebenza kanzima ukuthumela ama-imeyili okufinyelela kubashicileli. Ngemuva kwalokho, ababhali bakho bakha okuqukethwe ngokuzinikela. Kepha, ngemuva kwamasonto ambalwa womkhankaso wethulwe, wabona ukuthi awutholanga miphumela.
Kungenzeka kube nezici eziningi ezithinta ukwehluleka. Kungaba umqondo ombi, imicimbi yangaphandle ezindabeni, noma, ukungatholi impendulo efanele kuma-imeyili akho okufinyelela. Futhi, izixhumanisi zokwakha nezindawo eziphakeme zeziphathimandla zesizinda akulula.
Ngakho-ke, uma umkhankaso wakho ungadonsi ithrafikhi enhle, ungakhathazeki. Udinga nje ukulungisa isu lakho, faka umzamo owengeziwe bese uqoqa imiphumela elindelekile. Manje, uma usalwa nobunzima beqhinga lakho lokwakha isixhumanisi eliholwa ngokungenzi lutho, ke le ndatshana ingeyakho.
1. Dala okufunwa ngumshicileli
Khumbula ukuthi umhleli uzolayishwa nokunye okuningi okuqukethwe. Ngakho-ke, bazobheka lokho kubhala okuzothandwa yizilaleli zabo. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi uhlela okuqukethwe kwakho ngokuya nge-imeyili yakho yokufinyelela ukuze umshicileli angadingi ukuchitha amahora ukuxhumana ahla enyuka.
Zibeke esicathulweni sezithameli bese ucabanga ngalokho ongathanda ukukufunda. Faka imithombo efanele yedatha, izingcaphuno, izithombe, njll. Ukuze kuyenze ikhange futhi ifundeke kalula. Musa ukudala okuthile okungahambisani nentshisekelo yomshicileli.
2. Yenza izindaba zakho zibe mnandi
Okukodwa kwe amaqhinga asebenzayo okwenza umkhankaso wakho Umsebenzi ukufaka izihloko zakho kumshicileli ekutholakaleni kokuqala. Lokhu kuzosiza umshicileli athole umbono ngokuqukethwe kwakho futhi kubenze bathokoze ngomkhankaso wakho.
Ngaphezu kwalokho, ungatholakali kalula njengoba abashicileli bemboza izinhlobo eziningi zezindaba zokuqukethwe ezingaba ngesimo se-infographic, noma ngisho, okuthunyelwe kwezivakashi. Kalula, cela ukuthi ngabe isihloko sihambisana yini nezithameli zabo futhi bangathanda ukusishicilela. Ungathengisi izindaba eziyisithupha ezihlukene ngesikhathi esisodwa, ngoba kungahle kudide umshicileli. Ngemuva kokuthola impendulo encomekayo kulokho okushiwo yinhloko yakho.
3. Unganqikazi ukulandela ama-imeyili akho okufinyelela
Isikhathi esiningi, awutholi mpendulo kokuxhumana kwakho kwangaphambilini kepha ungalilahli ithemba. Njengoba kushiwo ngenhla, abashicileli bavame ukuba matasa ngakho-ke bangaphuthelwa yizingxoxo zezinye izingxoxo. Ngakho-ke, ungalandelela ama-imeyili akho okufinyelela uma ungatholi mpendulo noma ukumbozwa.
Kodwa-ke, lokhu kukusiza nokuthi wethule isikhumbuzi esimnene se-pitch yakho esizokunika ukuqonda okungcono mayelana nendlela osebenza ngayo nomshicileli. Futhi, uma umshicileli ephelelwe yintshisekelo kokuqukethwe kwakho kwangaphambilini, ukulandelwa kungabakhuthaza ukuthi bakubheke futhi bavume nombono wakho, uma uhambisana nezihloko ezithandwayo zamanje.
4. Khomba izingosi ezifanele zezixhumanisi
Ngabe ucwaninge ngokwanele ngohlu olulindelekile lwabashicileli ngaphambi kokufaka umkhankaso wakho wokuqala? Uma kungenjalo, wenza iphutha elikhulu. Kuyalulekwa ukuthi uqonde i-niche yomshicileli futhi ingabe ihlobene nebhizinisi lakho.
Ungaqala ukugcina ishidi labashicileli ngekusasa elizayo ngokulandela nje izihloko abazikhulumayo. Ngaleyo ndlela, ungaba nohlu lwabashicileli abazothanda okuqukethwe kwakho. Ngaphezu kwalokho, kuzokusiza ukuthi wenze ngokwezifiso umyalezo wabashicileli ngokuqonda umsebenzi wabo ngamunye.
5. Yenza kube ngokwakho i-imeyili yakho yokufinyelela
Ingabe uthumela ama-imeyili okufinyelela afanayo ukubandakanya wonke umshicileli? Uma kunjalo, uzobona ukungabi nentshisekelo ohlangothini lwabahleli. Futhi, uma ulandelela isilinganiso sakho sokuchofoza, ungahle ubone igrafu eyehla. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi uqambe umongo wakho wokuphonsa ngokuya ngomamukeli we-imeyili.
Ngaphezu kwalokho, uma ngabe ubeke umkhankaso wezindaba ezisezingeni eliphakeme futhi wangatholi mpendulo, cabanga ngohlu lwakho lwezincwadi ezisesigabeni sesibili. Njengoba abashicileli begcwele ama-ajenda ahlukene namasheduli wokuqukethwe, ukumisa okukodwa kuphela kungaphuthelwa amathuba. Ungakhohlwa ukuguqula umlayezo othunyelwe.
6. Sondela ngamapulatifomu ahlukahlukene
Lokhu kulula kepha kuyasebenza iqhinga lokwakha isixhumanisi. Uma isu lakho elijwayelekile lifaka ukuxhumana nge-imeyili, kulokhu uthepha ipulatifomu entsha. Mhlawumbe, ibhokisi lokungenayo labashicileli ligcwele ama-imeyili ngakho-ke, balahlekelwa amanye awo.
Ungathumela futhi isixhumanisi somkhankaso wakho nge-Twitter noma i-LinkedIn, noma uthathe ifoni. Kuyisu lokusika ama-imeyili agcwele futhi ubambe ukunakekela komshicileli ngemikhankaso yakho.
7. Yiba ezindabeni eziphezulu
Kwesinye isikhathi, umkhankaso awusebenzi ngenxa yesikhathi esibi. Akekho ozoba nentshisekelo ngokuthile osekuvele kwenzekile. Ngakho-ke, kubalulekile ukubheka izehlakalo ezizayo nezehlakalo ezikuzungezile.
Isibonelo, wethule umkhankaso wokuhamba ngesikhathi sasebusika. Ngabe izosebenza ngempumelelo njengoba kungaba njalo ehlobo?
Khumbula, hlala ukhetha isihloko okungenani ezinsukwini eziyi-15 ngaphambi komcimbi ozayo noma izihloko ezisanda kushisa noma izindaba. Ngaphezu kwalokho, ungakhetha isihloko esivamile ukuze uthande izithameli zakho ezihlosiwe. Ungacacisa futhi isizathu ku-pitch yakho ukuthi kungani uthumela umkhankaso manje.
8. Lalela imigqa yezihloko
Ungahle uzibuze ukuthi ngabe ama-imeyili akho ayavulwa yini? Ngalokhu, ungasebenzisa isoftware yokulandelela ukwenza amasu wokufinyelela kwakho okuqhubekayo. Ngakho-ke, uma ubona amanani angavulekile amabi, ungazama amaqhinga ahlukile.
Zama ukuthumela ama-imeyili ngomugqa wesihloko obambekayo ukuze uthathe ukunakwa komhleli. Ungazama futhi nolayini abasha besihloko bama-imeyili ahlukile. Lokhu kumayelana nokwakha okuthile okuthakazelisa abashicileli futhi kubenze bachofoze nge-imeyili yakho ukuze bazi kabanzi. Esikhundleni sokumane usho isihloko sakho ngokusobala, ungasebenzisa imisebenzi efana nokwembulwa kocwaningo okukhethekile noma idatha entsha.
9. Nikeza okuthile okukhethekile
Uma unikeza okuthile okukhethekile kumshicileli, nakanjani bazokuthenga. Lokhu kungonga nomkhankaso wakho ongenzi kahle. Njengoba kushiwo ngaphambili, dala indlela eqondene nomuntu futhi ugcine ukuxhumana kufanelekile futhi kufanele.
Futhi, uma umkhankaso wakho ungasebenzi kahle, cabanga ukusebenza nabashicileli abake basebenza nawe phambilini bese ubanikeza okuqukethwe okukhethekile isikhathi esithile. Lapho usuthole ingwegwe enamandla yomkhankaso omkhulu, ungaqala ukuxhumana okuqhubekayo kwensizakalo kanye nendlela yokushicilela esezingeni eliphakeme.
Amaphoyinti angenhla azokusiza ukuthi uthuthukise i okuqukethwe okuholwa imikhankaso imikhankaso, kepha kungathatha isikhathi ukukhipha imiphumela emihle kuma-rankings akho. Lesi sikhathi sincike kwimisebenzi yakho, ukuncintisana embonini yakho, amagama angukhiye aqondisiwe, umlando namandla wesizinda sakho.
Ngaphezu kwalokho, kufanele ulandele inqubekela phambili yakho, uqale ngenothi lokuthi ukuphi manje. Ngaleyo ndlela, ungadala ukulindelwa okungokoqobo kokuhlelwa kwewebhusayithi yakho kanye nemephu yomgwaqo yokuthi ungayifinyelela kanjani. Ngemuva kwalokho ungaqala imisebenzi ngokuya ngohlelo lwakho lokuthuthukisa iwebhusayithi yakho, ukusebenza kwe-inthanethi, nebhizinisi.
Tags: isu lokufinyelela emuva le-backlinkisu lokufinyelela emuvaisixhumanisi imikhankasoukufinyelelaamasu seo